Coffee laga yaabaa in qaboojiska ee ugu caansan caalamka. Cilmi Latest Muujin xaddi badan tahay in aanay hayn lahaa been ah in dhowr dal oo kale iyo in ka badan 50% dadweynaha Mareykanka ay yihiin kuwa Cabbi kafeega. Tani waxay ka weyn tahay arrin mar dambe ahaantii wuu ku caawinayaa inaad sharaxdo sababta waa sida noocyo fara badan oo coffeemakers la iibsan karaa maanta.
Iyada oo sida diyaariyeen kala duwan oo ah qalabka caffeine, waxaa jira duwan oo dheeraad ah si aad u coffee-cabo dadweynaha ka badan sidii hore. Main-il Hababka caansan ayaa waxaa ka Get Buugga iyo iswada, Inay xilkii espresso kofeega iyo nadiifiyo. Mid kasta oo ka mid ah hababka waxa uu leeyahay sifo gaar ah oo dhowr ah in loogu balan qaaday in uu soo jiito qaybta gaar ah oo dadweynaha coffee-cabidda.
The brewers espresso stovetop kafeega aasaas ahaan waa hab hage loogu diyaar caffeine espresso mar aadan helaan koronto tamar ama helitaanka edition ah automatic ah. Tani waxay kaa caawinaysaa waxa ay noqon mashiinka kaamil ah kafeega si ka baxsan qaadan on socsocodka, ama backpacking booqashada waa in aad dareento baahida loo qabo in la soo saaro socod espresso ah. Marka hore biyaha lagu meeleeyo korntada calaacalaha iyo ka dib in ay jirto filter koorta sugan gudahood foornada iyo ka buuxsamay sabab espresso ah. Next ugu waxtar badan si tartiib ah ayaa la adkeeyay iyo kii waa meel weyn khayraadka heerkulka. From kulaylka dalab, ka dib markii hogaanka foornada waxaa ka buuxsamay qaxwaha oo immika brewed waxaa la saaro ka dib markii dhawr daqiiqadood ka iyo espresso waxa ay u diyaargaroobayaan in lagu siiyo. Hoos mar kale, la'aanta Habkaani wax kululaaneysa ee muujinaysaa caffeine u leeyahay in si degdeg ah u adeegeen.
Automated iyo Manual faleebo Coffee Mashiinada
Nooca ugu caansan Coffee gaare ayaa weli waa coffeemaker automatic-faleebo ku. Khariidad waxa muhiimka ahi waa dhif xarunta iyo wax soo saar leh. Ku dar biyo cusub ee taangiga dhisay-in, gelin sifeynta ah oo wuxuu galay haystaha shaandhaynta mid waxtar leh, go'aamiyo sababo kafeega doortay iyo buuxi si shaandeynta ee dibna riix ku biiro bilowga. Dhawr daqiiqadood gudahood dareenkaaga ayaa aad ugu faraxsan caraf ee caffeine oo immika brewed in kulul yahay by! Naqshado badan oo kale oo ay leeyihiin ka dhisay-in saacaddu qayliso daray sanduuq khafiifsan lug si aad u kafeega wadaa aad espresso oo la dhigay hr mid ka mid ah habeenkii ama galabtii, iyo reebay ma aad si joogto ah u qaboojiso.
Mashiinka qaxwaha faleebo Information samayn yar oo dheeraad ah ay leeyihiin qabtaan sababtoo ah waa inaad uumi biyaha la isticmaalayo isha kale diiran, laakiin ka dib in ay asal ahaan waa coffee-qaadashada habraaca la mid ah si loo helo sababaha Java gudahood filter iyo diyaarinta biyo kulul iyada oo shaandhaynta si dheecaanka caffeine loo ururiyey diilinta ama sanduuqa hoose. Mid ka mid ah hanti wanaagsan faa'iido ah mashiinka daataan Buug-qaxwada waa xaqiiqda ah in uu yahay meesha la aad ugu kasta sababtoo ah ma waxaa saamayn ku heli kartaa adigoo korontada si ay u isticmaalaan sidaas awgeed waa weyn ee kaambada iyo sidoo kale hawlaha kale ee dibadda.
Yaan ka espresso Coffee
Saarayaasha Java coffee ayaa koray si ay u badan oo dheeraad ah la awoodi karo waxay noqon sanadihii in ay yihiin ugu dambeeyay oo ay sabab u tahay tan, ay soo koraya ee iskhilaafay badan isticmaala kafeega wax ka badan idmo socod caadiga ah ee aqbalaada doonaya. Waxaa haatan jira noocyo dhawr ah hababka espresso kafeega ka dooran, aalladda automatic oo kala ah qayb automatic. The ka yar tahay inaad qabato si ka warheleen aad java, sida caadiga ah, ee si toos ah soo saaraha Java dheeraadka ahi waa, laakiin nasiib sare sicir waa in ay soo iibsato. Tusaale ahaan, taas oo ku dayasho semiautomatic joojinaysa laga yaabaa kafeega ah, warheleen caffeine ah, cabbayso aad fijaan oo tuurid salaysan jir, wax soo saarka si buuxda iswada sidoo kale ee caadiga ah waxaa laga yaabaa qaxwaha aad Shaqsiyan sidoo, iyo kii super automatic espresso kafeega samayn kartaa dhamaan kor ku xusan kaloo ku sii haysashada daray sifooyinka sida tusaale ahaan dhisay-in sida diirada biyaha iyo guriga-nadiifinta.
Inay xilkii Products
Ayaa hadda noqday mid aad horyalka Talyaaniga iyo caanka ah sanadihii la soo dhaafay. La shaqaynta sida faleebo waa in mashiinada automatic, ay kasoo muuqan awood u leeyihiin inay isticmaalaan gasacadaha daboolka prepackaged of bunka qaaska ah ee keegagga espresso in uu yahay dhadhan. Isticmaalka badan oo silsilado kafeega sumcad sida Starbucks hadda iibisa midaynaysa ay kafeega ugu qatarsan ee qaab qashir, macaamiisha si hufan dherigii isla Dhadhaminta of Java gaar ah guriga oo ay lahaayeen madax ka baxay iyo iibsan ka hor in qiimaha sare ah ka heli kartaa.
Faransiiska Press Coffee-dilana
Sidoo kale loo yaqaan “riix dheryihii” ama ” dheryihii cabbeeyaha “, ka coffeemakers Press in ay yihiin Faransiiska yihiin sida aan caadi ahayn iyagoo ee la soo dhaafay. Espresso Abaabulka waa ka badan shaqeeyaan badan u lahaa codsanayso mid ka mid ah coffee-sameeyayaal sababtoo ah waa bunkariyaha buug hore u dib u eegis. Digsiga waxaa si dhab ah beebka galaas ka kooban a, mesh cabbeeyaha in u shaqeeya sida tusaale ahaan shaandhaynta. Si looga caawiyo in qaxwada sababaha qaxwaha waa in marka hore aan kuu qiyaasay, by digsigii, dheregtaan soo socda ee biyaha ficil kulul. Tooratooraha waxaa markii dambe hoos u riixriixan oo ay weheliyaan cabbitaan ah liquefied waxaa lagu qasbey fijaan sugitaanka ama dherigii, ka dib markii daynin boorish Java in ay uga yaacday ilaa xiliyo dhowr ah. Sida ay jiraan tiro factor kululaynta maarmaan ama ilkaha hoose xirmo Java ah, aad waxaa ku dhegi weel daboolan si ay u ilaaliyaan waxa kulul ka dib ama u baahan tahay si ay u caawiyaan cabbitaan caffeine ka dhakhso leh.
Ugu mar coffeemakers kofeega ahaayeen nooca caadiga ah ee brewers kafeega guryahooda badan, hawl hadda soo bandhigay qalab ka faleebo ku jiray oo automatic ah. Habase ahaatee waxay helaan meel mar kasta oo uu coffee-gaaraha loo baahan yahay in ka dhigi karaa liiska badan oo Java ah, halka ay 10-14 Xadka fijaan ama ka yar halka aan sida fiican u yaqaan maanta. Percolators casriga ah waxaa laga heli karaa sida Hababka elektaroonik ah iyo shooladda ugu sareeya oo la dejin doonaa sida mashiinka qaxwaha iswada in ay yihiin dheeraad ah. In kasta oo biyo la kariyey, Habka qaadashada kafeega waxay ku salaysan tahay biyo ka hawlgala iyo goorba u badan sababo qaxwaha, yeellay kaliya filter bir ah. Mid ka mid faa'ido ah geedi socodka waa in espresso ee guud ahaan helo adag oo khadhaadh dhadhankiisu dheer u sii maraya wareegga abuuray.
Malaha foomka oddest baadhi ee mashiinka-kafeega noqon doono mashiinka mashiinka qaxwaha. Doonaya ka video sayniska khayaaliga ah sida wax, qalab ka kooban yahay laba weel link by habka of tuubada ugu intifaacaan ah. Sifeynta ayaa ku taalaa qaybta hoose ee Dheriga in sare ahaa. Shaqsi hore waxay bixisaa weelka iyo kafeega dood labaad, biyo cascades soo socda in weelka dhimay, in espresso keeni. Halkee biyaha ayaa markii dambe la karkariyey xiga kii waxaa la dhigay oo ay weheliyaan a iyo sidoo kale uumiga ka soo afjaridda waa daranyihiin marka la isku daro tuubo ah in ay u weel ugu sareeya. Ka dib markii saabsan 3 daqiiqo dheriga waxa laga soo qaatay sahay kulaylka oo ay weheliyaan Uumi Uumiga dib biyo biyo la qasbi karo iyada oo shaandhaynta iyo dib u model hoose. Shayaadiinta weel cusub ee Java ayaa haatan ku fadhiya gudaha nidaamka dhimay. Hab jeclaan lahayd in aad koob-ama weel of Java!
Dabcan, ee dunida ka kafeega dooran kartaa ka xulash balaaran oo qaxwaha-sameeyayaal. From kariyaha in raqiis weelasha espresso sare qalabka kafeega super dhamaadka sare leh oo ay si toos ah, mashiinka kafeega ah waxaa loogu tala galay miisaaniyadda kasta iyo sidoo kale rabitaan kasta oo. Media in uu yahay mid cajiib ah! Halkan Maanta waa warkii raaxo. Waxa suurto gal ah fahamka qaab aad ka faa'iidaysan kuma filna, la mashiinada Java badan oo ay ku doortaan laga bilaabo maanta. Mid kasta oo ka mid ah moodooyinka mashiinka qaxwaha kor ku yaqaan waxaa jira noocyo iyo qoraalkii ka soo xusho dad badan oo kala duwan.
Ilaah mahaddiise Internet aad bixisaa xal dhab faa'iido iyo deg deg ah in la ogaado waxa uu yahay hadda la heli karo ee qiimaha. Iyadoo muddo yar oo baaraya sidoo kale waxaa macquul ah in ay gacan bir ah qashinka ka kafeega sameeyayaal in aad ugu badan tahay. Si fudud u heli online iyo booqo dhowr bunkariyaha qiimeeyo goobaha. Sidaas waa inaad ka fiirso wixii aad baaro si taxadir leh, fadlan xasuuso in mid ka mid Java kasta goobaha qiimaynta gaare caadi ahaan waa kala duwan.